DEG DEG:Madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay war aan laga fileyn qaatayna go’aan la yaab leh kadib markii…. | Puntland News
DEG DEG:Madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay war aan laga fileyn qaatayna go’aan la yaab leh kadib markii….
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa bilaabay in uu fuliyo balan qaad uu horey u sameeyay oo aheyd in uu xiliyada qaar ku shaqeyn doono Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga oo kutaala Laamiga Warshadaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa bilaabay in isbuuciiba dhoor mar uu tago xarunta Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya si uu ula socdo howlaha Wasaarada iyo dib u habeynta ciidanka Milatariga, waxa uuna maanta saacado kusoo qaatay xarunta Wasaarada.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweynaha ayaa kulamo joogta ah xarunta kula qaadan doono Madaxda Wasaaradda Gaashaandhigga, Saraakiisha ciidamada xoogga, isagoo ka xog wareysanaya xaaladda ciidamada iyo sida ay wax u socdaan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa marar badan tagay Wasaarada Gaashanadhiga, waxa uuna horey u balan qaaday in si joogto ah u tagi doono uguna hogaamin doono howlaha ciidamada Milatariga.